दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २३ गते सोमवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ९ - Sutra TV Sutra TV
मेष : तपाईंले आज राम्रो स्वास्थ्य हासिल गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई सफलता दिनेछ। तर तपाईंले आफ्नो शक्ति नाश हुने कुराबाट जोगिनु पर्छ। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। पारिवारिक जिम्मेवारीहरू बढ्नेछन्, जसले तपाईंको मनमा तनाव ल्याउनेछ। आफ्नो प्रियको। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। आजको दिन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा अरूलाई बुझाउन उत्सुक नहुनुहोस्। गलतफहमीको नराम्रो चरण पछि, साँझसम्ममा तपाईंको जोडीको प्रेम पाउनुहुनेछ।
वृष : स्व सुधार परियोजनाहरूले धेरै प्रकारको फाइदा हुनेछ, तपाईंले आफ्नो बारेमा राम्रो र विश्वस्त महसुस गर्नुहुनेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि सही दिन। तपाईंको परिवार तपाईंको उद्धार गर्न आउँछ र संकटको समयमा मार्गदर्शन गर्नेछ। तपाईंले अभ्यासमा रत भएका अरूलाई हेरेर केही पाठ सिक्न सक्नुहुनेछ। यो आत्मविश्वासलाई बलियो पार्नाले अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन्, जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
मिथुन : तपाईंको सहारामा धेरैले निर्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई निर्णय लिनको लागि मनको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। बिरामी भएको आफ्नो आफन्त हेर्न जानुहोस्। तपाईंको प्रेमीकासँग केही भेद उत्पन्न हुन सक्छ, तपाईंले आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्न गाह्रो पर्नेछ। तपाईंले प्रत्येक कदममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नुभयो भने, सफलता निश्चित तपाईंको हो। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। एउटा व्यक्तिले आज तपाईंको जोडीको धेरै चासो लिन सक्छ, तर केही नराम्रो भएको छैन भन्ने तपाईंलाई दिनको अन्तमा महसुस हुनेछ।
कर्कट : आफ्नो स्वास्थ्य बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यो रोग विरुद्ध शक्तिशाली खोप हो। तपाईंको सही मनोवृत्तिले गलत मनोवृत्तिलाई हराउनेछ। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्नो जीवन साथीको लापरवाहीले सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। आफ्नो बहुमूल्य समय खर्च गर्नुहोस् र आफ्ना खुसीका सुनौला दिनहरू पुनः प्राप्त गर्न आफ्ना रमाइला सम्झनाहरु याद गर्नुहोस्। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। नयाँ प्रस्तावहरू लोभ्याउने हुनेछन् तर यसका लागि कुनै पनि हतार निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुने छैन। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
सिंह : मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। यो एउटा अर्को धेरै ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन हो र अनपेक्षित लाभ हुने सम्भावना छ। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। तपाईंका आँखा आफ्नो प्रेमीको अँध्यारो रातलाई प्रकाश गर्न सक्ने उज्ज्वल छन्। आफ्नो लक्ष्यतिर चुपचाप काम गर्नुहोस् र तपाईंले सफलता प्राप्त नगरूञ्जेल आफ्नो मनसाय खुलासा नगर्नुहोस्। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
कन्या : कुनै हटाउन नसकिने परिस्थितिले केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर तपाईंले आफ्नो समतोलन राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ र समस्याको समयाधान गर्ने तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। यस दिनलाई एउटा उत्कृष्ट दिन बनाउनको लागि परिवार वा घनिष्ठ मित्रसँग भेला हुनुहोस्। आज आफ्नो लामो समयदेखि चलिआएको विवाद समाधान गर्नुहोस् किनकि भोलि धेरै ढिलो हुन सक्छ। तपाईंले गरेका कार्यबाट कसैलाई फाइदा लिन नदिनुहोस्। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। तपाईंले आफ्नो जोडीको कुनै काम बारे अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्नु हुनेछ। तर पछि यसलाई राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
तुला : प्रेम, आशा, विश्वास, सहानुभूति, आशावाद र इमानदारी जस्ता सकारात्मक भावनाहरू तर्फ आफ्नो मन आकर्षण गराउनुहोस्। यी भावनाहरू एकपल्ट पूरा स्थापित भएपछि, मनले स्वतः हरेक परिस्थितिको सकारात्मक प्रतिक्रिया गर्नेछ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। तपाईंका निर्णयलाई अभिभावकीय मद्दत अत्यन्तै आवश्यक छ। तपाईंले प्रेममा हरेक दिन पर्ने आफ्नो प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईं विदेशी जागिरको लागि आवेदन गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, आज राम्रो दिन जस्तो देखिन्छ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंको यो एउटा रमाइलो रोमान्टिक दिन हुन सक्छ, तर केही स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्।
वृश्चिक : आज तपाईंले आराम गरेर र घनिष्ठ मित्र र परिवारका सदस्यहरूको बीच आनन्द प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन आफ्नो परिवारसँग साँझ मैनबत्तीको प्रकाशमा खाना खाएर आनन्द लिनुहोस्। व्यक्तिगत निर्देशनले तपाईंको सम्बन्ध सुधार हुनेछ। नयाँ कुरा सिक्ने तपाईंको प्रतिभा उल्लेखनीय हुनेछ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
धनु : तपाईंको रोग दुखको कारण हुन सक्छ। तपाईंले परिवारमा आनन्द बहाल गर्नको लागि सकेसम्म छिट्टै यसलाई हटाउनु आवश्यक छ। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ, तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। समग्र रूपमा लाभदायी दिन हो, तर तपाईंलाई भरोसा लाग्ने कसैले तपाईंलाई गिराउन खोज्नेछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध जादुले भरिएको हुनेछ, मात्रै यसलाई महसुस गर्नुहोस्। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। बाँकी रहेका समस्याहरू छिट्टै नै समाधान गरिनु पर्ने छ र तपाईंले कहींबाट सुरु गर्नु पर्नेछ भनेर याद गर्नुहोस्, त्यसैले सकारात्मक विचार लिएर आजैबाट प्रयास सुरु गर्नुहोस्। आज आफ्नो शानदार जोडीको न्यानोसँग तपाईंलाई रोयल्टी झैं महसुस हुनेछ।
मकर : तपाईंले आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु पर्नेछ, जसले तपाईंलाई परेशान र अत्यधिक त्रसित बनाउनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। टाढाको आफन्तबाट धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सन्देशले सम्पूर्ण परिवारमा र विशेष गरी तपाईंको लागि राम्रो समाचार दिनेछ। कसैको नयाँ रोमान्सले तपाईंको आत्माको उत्थापन गर्दछ र तपाईंलाई खुसीको मुडमा राख्छ। आज सुरुदेखि अन्तसम्म काममा तपाईंले आफुलाई ऊर्जावान महसुस गरिरहनु हुनेछ। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा समर्पित हुनेछन्।
कुम्भ : कामको दबावले आज केही तनाव ल्याउन सक्छ। महत्वपूर्ण मान्छेहरू विशेष वर्गका मान्छेलाई केहि धन प्रदान गर्न तयार हुनेछन्। आफ्नो परिवारको महानता र केही सार्थक काममा जोखिम लिनुहोस्। नडराउनुहोस्, किनभने छुटेको मौका कहिल्यै फिर्ता नआउन सक्छ। आफ्नी प्रेमीकाको उट्पट्याङ्ग व्यवहारले तपाईंको मुड उदास बनाउन सक्छ। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
मीन : एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ, तर खर्चमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई बचाउन गाह्रो पर्नेछ। तपाईंले परिवारमा शान्तिनिर्माताको जस्तै काम गर्नुहुनेछ। समस्याहरू नियन्त्रणमा राख्न सबैको समस्या सुन्नुहोस्। भेटघाटको मिति कार्यक्रम असफल हुन सक्ने हुनाले निराशाको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। आफ्नो वरिपरि के के चल्दैछ भन्नेमा ध्यान दिनुहोस्, कसैले आज तपाईंले गरेको कामको लागि श्रेय लिन सक्छ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। तपाईंलाई र तपाईंको जोडीलाई साँच्चै नै आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि केही ठाउँ आवश्यक छ।